Soomaali lagu dilay Koonfur Africa - BBC Somali
Soomaali lagu dilay Koonfur Africa
Laba qof, ayaa xalay lagu dilay magaalada Ivanpark ee gobolka galbeedka Cape, oo 90 km u jirta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Africa.
Labada qof, oo Soomaali ah, ayaa kala ahaa Maxamed Xasan Cali, oo 22 Jir ahaa iyo Muqtaar Cali Dhuxuloow, oo 35 sano jiray. Waxaa sidoo kale la dhaawacay labo dhalinyara ah oo hadda isbitaalka yaalla. Warkani waxaa wariyaha BBC Cabdirisaaq Catoosh u xaqiijiyay Ehelada ragga la dilay.
Dilka ayaa ka dhacay gudaha dukaan ay ku ganacsanayeen Soomaalida, oo rag hubaysan ugu soo galeen, kuwaas oo rasaas ku furay. Mid ka mid ah labada qof ee la dilay, ayaa isla goobta ku dhintay halka kan kale uu dhintay markii ibtaalka la geeyay.
Dalka Koonfur Africa, ayaa ilaa 7 qof oo Soomaali ah lagu dilay ilaa dhamaadkii bisha May, kuwaas oo dhamaantood ahaa rag ganacsato ah oo lagu dilay gobolada Eastern iyo Western Cape ee dalka Koonfur Africa, sida uu BBC u xaqiijiyay Axmed Dowlo, oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Africa.